Umahluko wohlobo lweTypographic phakathi kokuKhangela kunye neKerning kunye nolawulo lwayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umahluko wohlobo lweTypographic phakathi kokuKhangela kunye neKerning
UPablo Gondar | | Idizayini yeMifanekiso, Tutorials
Umahluko wokuchwetheza phakathie umkhondo y Ukuqonda ngeenjongo zokuqonda ngakumbi Ihlabathi lokuchwetheza kunye nokwazi ukuba olu hlobo lokulungiswa kwe-typographic lusebenza njani kumaxesha amaninzi lunokusombulula enye ingxaki. Ubuchwephesha ngu into ebalulekileyo yokunxibelelana, ukusukela kumaxesha amandulo ukubhala bekusetyenziswa njengenkqubo ye usasazo lomyalezo kunye nomxholo wolwazi, namhlanje i-typography iyaqhubeka nokukhula kwicandelo legraphic kwaye kubalulekile ukuba uyazi ukuba uyiqonde njani kwaye uyiqonde.
Amagama aphambili okulawula ngaphakathi kwehlabathi loyilo kwakhona ukuba ube yingcali kuba kuqeqesho kufuneka sebenzisa isigama ngayo, emva koku isikhundla silibale amabinzana anje ngala: "hlula oonobumba ngakumbi", "dibanisa oonobumba ngakumbi" ... phakathi kwabanye. Ukuba uyafuna Yazi kancinci typography funda oku post.
Wonke umntu uyazi typography kwaye uyazi indlela yokuyisebenzisa nakweyiphi na inkqubo yokuhlela kodwa Ngaba bangasisebenzisa isigama ngokuchanekileyo? Ngaba uyazi ukuba kutheni kufuneka uguqule ifonti? Kuqheleke kakhulu wenze utshintsho olungenantsingiselo Xa uqala apha emhlabeni, kancinci kancinci uqala ukuqonda ukuba utshintsho ngalunye luvelisa a imvakalelo eyahlukileyo kwaye uqala ukutshintsha kuphela into eyimfuneko ukunxibelelana nale nto ufuna ukuyithetha.
3 Guqula ukuThutha kunye neKerning kwi-Indesign
4 Guqula ukuKhangela kunye nokuKhangela kwi-Photoshop
5 Guqula ukuThutha kunye neKerning kwi-Illustrator
El yokulandelela Iziqulatho ze ukuguqulwa kohlobo lwehlabathi oonobumba bonke namagama, xa siguqula i yokulandelela sifumana abalinganiswa ukuba babe hlukanisa okanye unamathele nangakumbi, ngale ndlela, ukuba isicatshulwa sigubungela indawo enkulu okanye encinci kulwakhiwo.
Kuya kufuneka sazi ukuba uhlobo ngalunye lohlobo xa luyilwe lune amathambo amiselweyo, into esiyenzayo xa silungisa la maxabiso kukutshintsha loo skeleton yenye esiyithandayo ngakumbi ngokusekwe kuyo iimfuno zethu.
El ukucacisa iquka ukulungisa omnye okanye abalinganiswa ngaphakathi kwigama. Njengakwi yokulandelela podemos ncamathisela okanye wandise abalinganiswa ngokweemfuno zethu.
Zimbini zikhoyo iintlobo zokulungiswa xa sithetha yokulandelela y uxwebhu:
vula (oonobumba abaqhubeka bodwa)
ivaliwe (oonobumba abasondeleyo)
Simele Qaphela xa siguqula ifonti kuba kumaxesha amaninzi ukuba sihamba ngaphezulu siza kuphulukana nokufundeka, eyona nto ifanelekileyo kukuguqula kuphela loo magama ayifunayo ngesizathu esivakalayo.
Kwizihlandlo ezininzi kuya kufuneka senjenjalo lungisa i yokulandelela yomhlathi Ukulungelelanisa amagama kwiimfuno zethu ngaphandle kokutshintsha imodeli esiyenzileyo, umzekelo oqhelekileyo kuxa kumhlathi wesicatshulwa igama litsibela umgca olandelayo kwaye sifuna ukuba ihlale injalo. Sebenzisa oku kuguqulwa kuthintela ukuba kungenziwa iziqwenga zamagama kunye namagama angatshatanga kwimigca yokugqibela yesicatshulwa.
Ukuba uhlobo lokuchwetheza belusapho ngesele sinalo Vala izihlobo nge yokulandelela ivaliwe, izihlobo ezikude nge yokulandelela open Kunye ukukhutshwa ekuhlaleni nge ukucacisa vula.
Singafumana ubuninzi bezoyilo apho kuchwethezwe khona zilungisiwe okanye zayilwa ngohlobo lokubonisa imvakalelo yomanyano kunye nokwahlukana (kuvaliwe okanye kuvulekile), kwimeko yeIipowusta zeemovie yinto enokubonwa kakhulu.
Sele sizibonile ezinye iikhonsepthi ezisisiseko malunga nokuba ziyintoni kunye nendlela yokulandelela kunye ukucacisa kodwa singayitshintsha njani kwiinkqubo ezahlukeneyo?
Makhe sibone indlela tshintsha yokulandelela kunye Ukuqonda kwezinye iinkqubo Uyilo: I-Photoshop, i-Indesign, i-Illustrator.
Guqula i Ukuqhuba y Ukuqonda en Isimilo
Ukutshintsha i yokulandelela kunye ukucacisa en Isimilo Into ekufuneka siyenzile kukukhetha isicatshulwa kwaye ucofe kwi phezulu kwimenyu, Kule nxalenye siza kubona ii icon ezimbini ezinamaqhosha ukuze zikwazi ukuguqula amaxabiso azo. Ukuya tshintsha ukucacisa kufuneka sibeke Chwetheza ikhesa phakathi koonobumba esifuna ukuyiguqula.
Guqula i umkhondo y Ukuqonda en Photoshop
Ukutshintsha i yokulandelela kunye ukucacisa en Photoshop into ekufuneka siyenzile kuqala kukususa ithebhu yomlinganiswa, ukwenza oku kufuneka siye kwimenyu ephezulu window / uphawu. Emva koku a iwindow entsha kwaye sinokwenza uhlengahlengiso.
Guqula i Ukuqhuba y Ukuqonda en Umzekeliso
Ukutshintsha i yokulandelela kunye ukucacisa en Umzekeliso into ekufuneka siyenzile yile khetha isicatshulwa kwaye ucofe kwi imenyu ephezulu yomlinganiswa, Imenyu iya kuvula ngokuzenzekelayo ngokhetho lwe yokulandelela y Ukuqonda.
Sele uyazi kancinci malunga I-typography kunye nesigama sayo Ukuze uthethe ngendlela enobungcali, kwelinye icala kuyathakazelisa ukwazi ukuba ungazenza njani ezi nguqu sizibonileyo ukusuka kwindawo yokujonga imeko kwindawo ebonakalayo ngokusebenzisa iinkqubo ezahlukeneyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Umahluko wohlobo lweTypographic phakathi kokuKhangela kunye neKerning
Ulenza njani iphepha elimakishayo kwi-Indesign